Taratasy Iray Avy Ao Shina Ho An’ilay Norveziana Mpamono Olona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Aogositra 2011 18:55 GMT
Vakio amin'ny teny Français, македонски, русский, Español, srpski, 한국어, 日本語, Italiano, English
Handalinana io fanontaniana io, Fatty Flower, vehivavy Sinoa iray, dia nanoratra taratasy iray lava be [zh] ho an'i Breivik tao amin'ny bilaoginy Douban . Nanolo-kevitra an'i Breivik ho lasa Sinoa izy amin'ny fiainany ho avy ka ho tsapany amin'izay hoe tena sambatra izy teraka tao Norvezy. Nosoratana tamin'ny fomba manaraby tokoa, ilay taratasy dia toy ny mamaky tantara lava be momba ny adim-piainana atrehan'ny Sinoa antonontonony manomboka hatrany amin'ny nahaterahany. Niaka-daza tokoa ilay lahatsoratra ary naely tamin'ireo haino aman-jery maro, isan'izany ny Gazety ao Guangzhou Southern Metropolitan Daily.
Ity ambany ity ny dikantenin'ilay lahatsoratra fototra, niaraka tamin'ny fanehoan-kevitra vitsivitsy notsongaina tao amin'ny sehatra ho an'ny mpamaky :
Tongasoa eto Shina.
Ho an'i Breivik,
Izaho dia zazavavy avy ao Shina. Andro vitsy lasa izay, henoko fa namono olona efa ho 86 ianao. Anio alina, nandamina ny saiko aho ary nanapa-kevitra ny hanoratra taratasy ho anao fony aho tao an-trano fivoahana. Miala tsiny aho noho ny hadalàko sy ny fomba firesako mivatravatra. Nefa mazava ho azy, mihevitra aho fa sahala amin'ny tsy ho vakianao akory ity taratasy ity.
Voalohany indrindra, sambatra ianao teraka tao Norvezy. Tsy mila ny handoa inon'inona amin'ny fianaranao ianao. Karakarain'ny Governemanta tsara daholo ny momba anao, hatrany antampon-doha ka hatramin'ny filahianao. Aorian'ny fanambadianao, afaka ny hahazo vola fanampiana ho an'ny zanakao ianao. Raha tsy an'asa ianao, afaka ny hahazo vola sy hisotro dite ao an-trano! Fantatrao ve fa miaina anaty fiarahamonina ahafahanao miray ara-nofo tsy misy teritery ianao ! Any amin'ny Tatsinanana, olona maro no mitsiriritra ny fiainanao! sy ny maha-lehilahy anao! Maninona no tsy ataonaoho harena ny fiainanao!
Ny tolakandro, nijery vaovao aho tao amin'ny Central China Television (fahitalavitra ao Shina renivohitra) ary nahita ireo mpanao gazety nitangorona teo anoloan'ny tranonao. Toerana mihaja tokoa! Misy rihana vitsy! Afaka hampakatra sy hikarakara vady maro ianao ao anaty tanàna lehibe tahaka itony! Avy eo, ireo mpilaza vaovao lasa nanaraka ny polisy tany amin'ny toeram-pambolenao. Manana toeram-pambolena ianao! Ary firy hektara no misy izany! Fantatrao ve fa ao Shina, ny toeram-pambolena dia vitsy noho ny toeram-panodinana! Fantatrao ve fa i Guo Furong sy Lu Xiucai [tsara ho fantatra : olona roa mpilalao fototra aminà tantara mitohy ao amin'ny fahitalavitra] dia tsy afaka ny hividy afa-tsy toeram-piompiana omby iray amin'ny antsasaky ny vola voahangony tamin'ny fiainany iray manontolo! Iainanao tsara ve ny fiainanao!
Be loatra ny olona novonoinao. Inona no anton'izany?
Ny olona rehetra mikatsaka fiainana tsara ary maniry ny ho ela velona am-pahamendrehana daholo. Tsy nila nitombo tanaty ronono voapoizina ianao. Na dia lafolafo ihany aza ny voankazo sy ny zava-maniry any amin'ny firenenareo, tsy ho fantatrao mihitsy ny tsiron'ny nahandroina amin'ny menakav tsy ara-dalàna efa avy nampiasaina. Ary tena matsiro izany. Mitsiriritra!
Rehefa mahatsiaro ho irery iny ianao, afaka mandeha mankafy hitazana ny Fjord. Rehefa mahatsiaro fahabangana iny ianao, afaka ny hanao “ski” na manjono. Na koa, rehefa ambany iny herin-tsainao, manakarama olona hanoroka sy hanafosafo anao; na dia ny hiditra amin'ny fanambadian'olon-droa mitovy koa aza mety. Inona no mbola tadiavinao ambonin'izany? Henoko fa manana trano any Frantsa ny rainao ary miaina tsara ihany izy any. Maninona moa raha mandeha mamangy azy any ianao, ary manao izany ho toy ny fitsangatsanganana miampita ranomasina? Fantatrao ve ny fahasarotana ho anay olon-tsotra aty Atsinanana raha hivoaka ho any ivelany izany?
Fantatro tamin'ny alalan'ny horonantsary nojereko fa misy tapakila ho an'ny fiaran-dalàmby mandeha ambanin'ny tany mamakivaky firenena ao Eraopa. Tsy fantatro raha maharakotra an'i Norvezy ilay izy. Fa amin'ny toerana tsara tarehy tahaka itony, afaka ny mitsidika tanàna ivelan'ny tanana miaraka amin'ny vadinao ianao amin'ny alalan'ny fiaran-dalàmby, mihinana sakafo matsiro sy mihira hira mahafinaritra. Mahafinaritra ery anie izany e.
Izay tsy mbola niaina izany dia tsy tena mahafantatra loatra ny fahasarotan'ny fomba fiainana amin'izany.
Tsy fantatro raha manana mpankafy na mpanara-dia ianao. Raha manana ianao, manoro hevitra azy ireo aho ny mba hodiany. Tahitahiana toy ny voninkazo kely ry zareo.
Misy ohabolana Sinoa izay manao hoe, “Raha ny iray mafana sady misakafo tsara, ny iray kosa misaina momba ny fitsiriritàna an-jambany. “Tsy dia tsara loatra ny teny Sinoako ka tsy fantatro raha ny “fitsiriritàna” eto dia misy ifandraisany amin'ny ara-nofo. Andao atao hoe dikany ratsy iny. Raha amin'ny fiteniko manokana, mamily ny herinao ho amin'ny toerana diso ianao. Eritrereto ireny ankizy Afrikana izay tsy mahalala ny dikan'ny hoe sakafo ireny. Tsy manana ny hery hieritreretana ny hamaly faty ny fiarahamonina akory izy ireny. Raha ny marina , tokony ho ny Governemantan'i Norvezy no kianintsika amin'iny tranga iny. Saino ny hoe : mikarakara loatra ny mponina ao aminy ny governemanta ka tsy manana ahiahy ny amin'ny fiainany ny olona. Avy amin'ny olna midonanam-poana ny sain-dratsy. Misy ohabolana manao hoe : ” ny olona mieritreritra, Andriamanitra mivanitika.”
Henoko fa tsy voatery ho faty ianao taorian'ny namonoanao olona maro be. Tsy fantatro raha tokony hiarahaba anao aho. Sady tsy izany koa fa zava-tsarobidy ho an'ny maro aminay ny maty ara-boajanahary.
Satria mety tsy hivoaka any am-ponja mandrakizay ianao, manasa anao aho mba hiova ho Shinoa amin'ny fiainanao manaraka. Aty, amin'ny tanin'ny tendrombohitra mavo (Yellow Mountain), renirano mavo (Yellow River), TambohoBe (Great Wall) sy renirano Yangtze, sarotra ny fiainana manomboka ianao vao teraka. Hatramin'ny voalohany, mila miatrika ny ronono voapoizina sy ny hena voapoizina ianao. Raha mbola kely, mila manatrika ireny “lakilasy tsy maintsy arahana” ireny ianao, mianatra Angilisy ary hofanina amin'ny hiatrika ” Olympiade “matematika . Raha tsara vintana ianao, mahazo tapakila handehananao any ampitan-dranomasina, ary miverina any amin'ilay toerana nisy anao fony mbola kely. Raha tsy dia tsara vintana moa ianao dia, mila manao fanadinana fidirana ao amin'ny Anjerimanontolo miaraka amin'ny ankizy an-tapitrisany. Aorian'ny Anjerimanontolo, manomboka ny hieritreritra namana sy asa amin'izay ianao. Ary tsy afaka ny hieritreritra firaisana ara-nofo sy hanan-janaka ianao raha tsy aorian'ny fahazoanao trano sy fiara. Aorian’ ny resaka firaisana ara-nofo, mety hahatsiaro tena ho very angamba ianao, na ho ho maivana amin'ny tsindrin'ny fiainana?
Nefa aza manahy, ny fiainana anie tsy ho mafy be foana. Ho avy tsy ho ela ny zanakao, ary mila mieritreritra ny fanabezana sy ny fahasalamany ianao. Mba hahafahan'ny zanakao ho tsara fanombohana, tsy afaka ny hiandry ianao fa atombohy ny hampianatra azy dieny mbola any ankibon-dreniny izy.
Eto dia voanteny 800 no hesoriko, satria efa niaina izany daholo ianareo tany aloha tany. Manomboka indray ny tsingerina mahazatra..
Mihevitra ve ianao fa mbola tsy ampy izay?
Tsy manahy, afaka ny hiresaka zavatra hafa isika. Amin'ny teny Anglisy, antsoina hoe zava-tsy nampoizina ilay izy; amin'ny teny Sinoa, loza.
Toy ny an'ny filozofia Marxist, ny tolotra amin'io zavatra io dia mihoatra lavitra ny tinady….
Tonga ny loza dia avy eo lasa, mamela anao hisidikìna sy hidaraboka, ary mora adino izy ireny…..
Angamba vola be mikararàna no ho hiraraka tampoka aminao avy amin'ny ATM (Avy amin'ny mpamoaka lahatsoratra : automated teller machine – milina fakana vola amin'ny banky). Angamba mety ho tra-doza sy hisidina eny amin'ny rivotra avy any anaty fiara mpanao fifaninanana ianao. Angamba mety ho voapotsitry ny Kamiao ambany hazo any ambanivohitra any. Angamba ianao, ho ambony ambany, hivarotra voankazo eny an-dalana, ary ho voadaroky ny manampahefan'ny tanàna. Angamba mety ho raisin'ny mpanarivo iray ho eo ambany fiarovany ianao (ho toy ny biby fiompiny), ary amin'izany ianao dia hiaina anaty fahampiana sy hajejoana. Nefa mety, raha tsy misy izany tantara izany, hanana fianakaviana tsotra ihany ianao. Indraindray, mety hitondra ny vady aman-janakao ivelan'ny tanàna amin'ny fiaran-dalàmby ianao. Fantatrao fa, ho entinao ivelan'ny tanàna amin'ireny fiaran-dalàmby haingam-pandeha ireny ry zareo. Toy ny hoe efa mahazatra ve? Efa niseho teo amin'ny fiainanao fahiny ve izany ? Nefa andraso, vao ny fiatombohany fotsiny no takatrao, fa tsy ny fiafaràny.
Mihinana sakafo matsiro ianao ary mihira hira mahafinaritra.Tampoka eo, voadonan'ny fiaran-dalàmby iray hafa avy any aoriana ilay fiara andalamby andehananao.
Ny tena mampangitakitaka amin'ilay izy dia ianao maty, kanefa ao anaty lisitr'ireo niharam-boina dia mbola isan'ny velona ianao.
Amin'izany resaka izany, mahatsapa ho be fihetseham-po ve ianao? Amin'ny 11:11 hariva izao ny ora aty Beijing. Mila matory amin'izay aho. Avelao feheziko anaty fehezanteny iray izay nolazaiko :
Sasany amin'ny fanehoan-kevitry ny mpamaky :
Nanao fahotana tafahoatra io ranamana io. Tsy ekena izany izy ho teraka indray ao Shina izany any aoriana
Sento . Avelao ny olona hafa firenena hiaina ny fiainana sarotra ao Shina. Amin'izay hahay hankasitraka ny efa ananany izy ireo.
Ny fonjan'i Norvezy aza mbola tsara noho ny tranon'ireo Sinoa sasany.
Ilay mpanoratra dia manàla baràka ny fomba fiainan'ny Sinoa fotsiny. Tonga dia hanilika izany ny olona manam-pinoana, fanahy ary fahatongavan-tsaina.
Ity lahatsoratra ity dia tena fanehoana ny fomba fisainan'ny Sinoa. Ny hanana fiainana milamina miaraka amin'ny sakafo sahaza izay no tena tanjona lehibe. Noho izany, ny Sinoa dia mahita fa sarotra ny hahazo an-tsaina ireo olona miaina anaty fahafenoana nefa mitady hirona hatrany amin'ny fitroarana. Io no mitranga satria tsy manana foto-pinoana isika, na ny fiainana laika no foto-pinoantsika. Na dia fanarabiana aza ity lahatsoratra ity, dia mamoaka ny fomba fisainan'ny Sinoa kosa.
Ireo izay manana ny fahafahana hanatsara an'i Shina dia tokony handray anjara amin'ny politika. Raha tsy izany , ampiharo ny lalàna , ary ahitsio izay diso rehefa mahita azy ireny ianao. Aza mitaraina fotsiny eto amin'ity sehatra natao hifampiresahana ity. Fandaniam-poana ny fahaizanareo fotsiny izany.